.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Media Player Classic နှင့် Screenshot ရိုက်နည်း
Media Player Classic နှင့် Screenshot ရိုက်နည်း
ဒီနည်းလေးက Video ဖိုင်တွေ တင်ပေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်ပေးတဲ့
ဇာတ်ကားတွေ ၊ သီချင်း စတဲ့ Video ဖိုင်တွေကို မကြည့်ခင်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ အမြည်းသဘော ပြထားတဲ့ ပုံစံလေးပေါ့။
ဖွင့် ကြည့်မယ့်သူတွေကိုလည်း ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ဖြစ်စေမယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ Screenshot ရိုက်ဖို့အတွက်တော့
Media Player Classic ဆိုတဲ့ Player ဆော့ဝဲလ်လေး လိုအပ်ပါတယ်။ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက်မှဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
[ 1 ] ပထမဦးဆုံး Media Player Classic ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် View ကနေပြီး Option ကို နှိပ်ပါ။
[2] Output ကနေ VMR9 (windowed) ကို ရွေးပြီး OK နှိပ်ပါ။
[3] ကိုယ် Screenshot ရိုက်ချင်တဲ့ Video ဖိုင်ကို Player ထဲ မောက်နဲ့ ဖိဆွဲပြီး ထည့်လိုက်ပါ။
[4] File ကနေ Save Thumbnails... ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Screenshot ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို သိမ်းဖို့ နေရာရွေးပြီး OK နှိပ်ပါ။
အဲဒါဆို ဒီလို ပုံလေး ရလာပါလိမ့်မယ်။ နမူနာပြထားတဲ့ သီချင်းလေး နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ Screenshot ရိုက်လို့ ရလာတဲ့ပုံများဟာ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးက ဆော့ဝဲလ်နဲ့
ဖိုင်ဆိုဒ် ပြန်ချုံ့လိုက်ပါ။ အနော့်တုန်းက မူရင်းပုံ2MB ကျော်ကို ချုံ့လိုက်တာ 300KB ကျော်ကျော်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ.. လာလည်ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..။
Posted by Thurainlin at 07:06
Labels: Computer, Software, နည်းပညာ